कांग्रेसमा तत्कालीन संस्थापन समूहका नेताहरु एउटै मञ्चमा, देउवाविरोधी समूहबाट शशांक कोइराला आउट ! | Hulaki Online
कांग्रेसमा तत्कालीन संस्थापन समूहका नेताहरु एउटै मञ्चमा, देउवाविरोधी समूहबाट शशांक कोइराला आउट !
पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा रहेका कांग्रेसका पुरानो सस्थापन समुहका नेताहरु एउटै मञ्चमा देखिएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ काठमाडौंको ब्यानरमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, युवा नेताहरु गगन थापा र प्रदीप पौडेल पनि मञ्चमा देखिए ।
कार्यक्रममा १३ औं महाधिवेशनअघिको तत्कालीन संस्थापन समूहका अधिकांश नेता सहभागी थिए । तर, पौडेल समूहबाटै चुनाव जितेका महामन्त्री शशांक कोइराला भने अनुपस्थित रहे । शेखर कोइराला पनि कार्यक्रममा देखिएनन् ।
जिल्ला सभापतिहरुको भेलाको पूर्वसन्ध्यामा भएको यस्तो खाले जमघटलाई विशेष रुपमा हेरिएको छ । चुनावी समीक्षाका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकदेखि नै कांग्रेसमा ध्रुवीकरणको सुरुवात भएको थियो । पदाधिकारी मनोनयनले त्यसलाई थप मलजल गर्‍यो । अहिले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरुमा देउवाइतरको समूह एक हुने र नेतृत्वको उम्मेदवारलाई हराउने प्रयास चलिरहेको छ ।
महामन्त्री कोइरालाको भूमिकालाई लिएर पौडेल समूहमा निक्कै असन्तुष्टि देखिएको छ । खासगरी पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले खुलेरै उनको विरोध गर्ने गरेका छन् । देउवासँग मिल्ने तर, पुरानो संस्थापन समूहको नेतृत्व गर्न खोजेको भन्दै सिंह समूहले महामन्त्री कोइरालाको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
सोमबार कार्यक्रमको आयोजक नेविसंघ काठमाडौंको सभापति मनोज वैद्य पनि सिंह निकटका हुन् । महामन्त्री कोइरालालाई मञ्चमा नराखेर देउवाविरोधी समूहमा नरहेको सन्देश दिन खोजिएको एक नेताले बताए । जेठ-२९,२०७५